ओप्टिकल भ्रम र असंभव आंकडा - परेडोक्स चित्रहरू
ओप्टिकल भ्रम र असंभव आंकडा
तपाई के देख्नुहुन्छ?
केहि त्यहाँ हिडिरहेको छ?
थप ओप्टिकल भ्रम
रङ पृष्ठहरू सबै उमेरका बच्चाहरूको लागि एक राम्रो स्तुति हो। हाम्रो वेबसाइटमा तपाईंले विभिन्न विषयहरूमा विभिन्न उद्देश्यहरू पाउनुहुनेछ: ओप्टिकल भ्रमको रेखाचित्र र असम्भव आंकडाहरू, तथाकथित परेडक्सहरू, प्रत्येक बच्चालाई मनपर्छ।
ओप्टिकल भ्रम र असम्भव आंकडाहरू
ओप्टिकल भ्रम - भ्रम
ओप्टिकल भ्रमहरू झूटो मानवको सबै पक्षहरूलाई एक सामूहिक शब्दको रूपमा हेर्दैछन्।
यो हुन सक्छ, एकै ओर, जब हामी वास्तवमा प्रतिनिधित्व गर्ने एक विशेष तरिका मार्फत के फरक देखि फरक कुरा देख्नुहुन्छ।
वा एउटै टेम्प्लेटमा फरक व्यक्तिले अन्य चीजहरू चिन्न सक्दछ वा केवल चीजहरू सारिएका हुन्छन् कि तिनीहरू परिचित वातावरणमा कहिल्यै पनि हुन सक्दैनन् र हाम्रो दिमागमा उलङ्ग छ।
हाम्रो ओप्टिकल भ्रमसँग मजा लिनुहोस्। यस टेम्पलेटसँग पृष्ठमा जानको लागि लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस्:
कुन रेखा लामो छ?
कुन व्यक्ति अरू भन्दा भन्दा ठूलो छ?
कुन सर्कल ठूलो छ
समानांतर वा कुरो?
समानांतर वा गलत
समानांतर वा छैन?
यस टेम्पलेटसँग पृष्ठमा लिङ्क परिवर्तनहरूमा क्लिक गर्नाले:
अनुहार वा फूल
तीन वा चार पट्टीहरू?
अप्टिकल भ्रम - तपाई के देख्नुहुन्छ?
तलका चित्रहरूमा, त्यहाँ सधै केहि हिँड्ने जस्तो लाग्छ, नजिकको हेर्नु हुन्छ! तस्विरहरू विस्तार गर्न तस्वीरहरूमा क्लिक गर्नुहोस्:
यी सर्कलहरू सार्दै छन् .... छैन
यदि यो छविमा केन्द्रित तरिकामा हेर्छ भने, मानव दृष्टिले परिपत्र संरचनाहरू सार्नको प्रभाव पाउँछ। निस्सन्देह, यस तस्वीरमा केही कदम चाल्दैन!
फेरि, हाम्रो दिमाग हाम्रो आँखामा अन्तरक्रियामा हाम्रो चाल छ: ओप्टिकल भ्रम पैटर्न को एक कल्पनात्मक पलशनमा हुन्छ।
क्यानिसजा स्क्वायर - त्यहाँ कुनै चीज देखाउँदै छैन
यद्यपि हामी विश्वास गर्छौं कि यो हाम्रो आफ्नै आँखाबाट स्पष्ट छ: बीचमा कुनै वर्ग छैन, हाम्रो दिमाग ढाँचाहरू परिचित पैटर्न देखिरहेका चित्र। यो घटना "कानिसजा स्क्वायर" भनिन्छ।
त्यो सबै पुरा तरिकाले गलत छ?
साँच्चै? विश्वास गर्नुहोस् वा होइन, क्रस लाइनहरू समानांतर छन्। तपाइँ यसलाई माप्न सक्नुहुन्छ वा दुई अलग लाइनहरूमा फोकस गरेर, तपाइँ देख्न सक्नुहुन्छ कि सबै रेखाहरू समानांतर छन्।
वयस्कों को लागि ओप्टिकल भ्रम
बच्चाहरू धेरै वयस्कों भन्दा धेरै फरक देख्छन् ...
असंभव आंकडा - त्रिकोण
असंभव आंकडा - सर्कल
असंभव आंकडा - सीढ़ीहरू
अप्टिकल भ्रम - अनुहार वा भाँडा
अप्टिकल भ्रम - सीधा वा घुमाइएको
अप्टिकल भ्रम - तीन वा चार
ओप्टिकल भ्रम रेखा
ओप्टिकल भ्रम - रेखा
अप्टिकल भ्रम - आकार
ओप्टिकल भ्रम - तपाई के देख्नुहुन्छ
ओप्टिकल भ्रम - सर्कल
ओप्टिकल भ्रम - सीधा वा कुरो?